Daawo Sawirada iyo Shahaadooyinka Ardeyda Suudaan u bexeeysa Inshaa allaah | ururka badbaado
Daawo Sawirada iyo Shahaadooyinka Ardeyda Suudaan u bexeeysa Inshaa allaah
Published on August 19, 2014 by ururkaba · 6 Comments
Osman Ahmed Hared says:
ASC salaan ka dib waan u hambalyeynayaa howl wadeenada ururka badbaado waan garanayaa culeyska ay leedahay mas uu liyadaa oo kale waan kasoo shaqeeyey in badan hadana ma filayo in aan ka dhex boxo marka waxan leeyahay markii ardada baxaan inta si rasmi ah ugu guuleysatay iney baxdo uu fariisato kursiga wax barashada in aan markale ka helno webka waad mahadsantihiin.
Osman Ahmed Xareed, waa halyaay horey ummadda ugu soo shaqeeyey, waxaan filayaa in Maleeyshiya aad nooga soo hesho Scholarships sida asxaabta kale ay ugu faa iideeyeen walaalohooda.
by Ismail Kudhan
Aweis A/llahi Hersi says:
waxaan u mahad celinaya ururka shaqada muhiimka ah ee sameenayaaan waxaaana urajeenaya iney guulo gaari doonaan waxaaana leeyahay dadaalkiinna sii laba jibbaara insha Allah
M. M. XALANE says:
Aan barwaaqo gaarnee ku dadaala waxbarashadda,
Aan bulshadda hogaaminee ku dadaala waxbarashadda.
Aan jahliga ka baxnee ku dadaala waxbarashadda.
is dilka iyo dulmiga ha dhamaadee ku dadaala waxbarashadda.
Da,yarta aad daadihisaane ku dadaala waxbarashadda.
si aad u dareentaan ducadii waalidkiin iyo intii idinku soo daashay gudaha iyo dibadaba ku dadaala waxbarashadda.
duul cilmigooda lagu la mahadiyo aad noqotaane ku dadaala waxbarashadda.
sidaas iyo nabad galyo iyo noli kulanta insha alaah
CabdulQaadir Maxamed Saciid "Gentleman" says:
Maasha Allaah, waxaad gaarteen heer la idinka filayey inaad gaartaan waana ilaah mahadiis, balse guushaasi waxaa la rabaa iney inoo noqoto dhiira gelin dheeraad ah maadaama ardeydan heerka jaamacadeed gaartey qaar badan oo ka mid ahi ay iskooladeena tuulooyinka ku yaalla ay wax ku soo barteen.
Iskoolada tuuladu waa aasaaska horu marka sababtoo ah bulshada tuula joogoodu wax yaqaan wey ka horeysaa bulshada inteeda kale…. Badbaado waad mahadsan tihiin, waloow aad waad mahadsan tihiin ka badan aad mudan tihiin.
masha,alaah walaalayaal dedaale waxaan rajeynaa inaan horumar dadkeene u horseedno insha,alaah anigane waxaan ahay ardey master degree ku diyaariye uganda gaar ahaan kampala